Dalkii 2-aad ee Gaashaanbuurta NATO ah oo diidey inuu ogolaado xubinnimada Sweden & Finland | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dalkii 2-aad ee Gaashaanbuurta NATO ah oo diidey inuu ogolaado xubinnimada Sweden...
(Hadalsame) 19 Maajo 2022 – Madaxwaynaha Croatia ee Zoran Milanovic ayaa qorshaynaya inuu faro wakiilka joogtada ah ee dalkiisa u jooga NATO inuu hos istaago ku biiritaanka Finland iyo Sweden ee ururka uu Maraykanku hoggaamiyo ee NATO, sida uu sheegay Arbacadii.
SABAB? Diidmadani waxay dareenka beesha caalamka kusoo jeedin doontaa dhibaatooyinka soo wajaha qowmiyadaha Croat-ka ee ku nool Bosnia iyo Herzegovina ee deriska la ah dalkiisa, sida uu Milanovic u sheegay suxufiyiinta.
Marka loo eego sharciyada doorashada ee hadda jira, wakiillada Croat-ku waxay ku tiirsan yihiin in lagu soo doorto codadka Muslimiinta Bosnia, oo loo yaqaan Bosniaks. Zagreb ayaa se riixaysa in dib loo eegto xeerkaas.
“Hore ayaan u iri, Croat-ka Bosnia ayaa iiga muhimsan xadka Ruushka iyo Finland,” ayuu ku qayliyey Milanovic.
Stockholm iyo Helsinki waxay si rasmi ah u jebiyeen taariikhdoodii dhexdhexaadnimada ahayd 15-kii bishan Maajo waxayna si rasmi ah u codsadeen xubinnimada NATO. Si kastaba ha ahaatee, aqbalaadda wadamada cusub ee kusoo biiraya ururka waxay u baahan tahay ogolaansho wadajir ah oo laga helo dhammaan xubnaha NATO oo 30-dal ah.
Turkigu waxa uu muujinayey sida loogu dagaallamo danaha qaranka, ayuu yirii Milanovic, isaga oo tilmaamaya in diidmada Ankara ay uga horjeedo heshiis kasta oo Sweden iyo Finland u ogolaanaya inay ku biiraan NATO ilaa ay soo cayriyaan kooxaha ay Turkigu u asteeyeen inay yihiin “argagixisada” ee xiriirka la leh Xisbiga Shaqaalaha Kurdistan (PKK) iyo Jabhadda Xoraynta Dadka (DHKP/C), iyo arrimo kale.
“Turkigu xaqiiqdii ma dhaqaqi doono kahor inta uu ka helayo waxa uu rabo.” ayuu yiri Madaxwaynaha Croatia oo aan sharrixin waxa Finland iyo Sweden ka galay wixii dalkiisa kala dhexeeya Bosnia.
Hadalkan ugu dambeeyey ee Milanovic ayaase sii kicinaya xiisadda kala dhexeysa xukuumadda Ra’iisul Wasaare Andrej Plenkovic, kaasoo uu ku eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu u istaago danaha Croatia, sida ay qortay majaladda maxalliga ah ee N1.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Croatia, Gordan Grlic-Radman, ayaa isna Arbacadii u sheegay Raadiyaha Dowladda in wakiilka joogtada ah ee Croatia ku metela NATO, Mario Nobilo, loo sheegay “inuu ansixiyo codsiga Finland iyo Sweden. ”Baarlamaanka Croatia “gebi ahaanba waa hubaal” inay ansixinayaan heshiiska.” ayuu raaciyay Grlic-Radman.
Previous articleMadaxwaynihii Maraykanka ee George W Bush oo la tusay wax lagu tilmaamay ”cibaaro adduun” (Daawo)
Next articleXOG: War kasoo kordhay lacagtii ay Xukuumaddii hore ka xayirtay Imaaraadka ee taalley Baanka Dhexe